शिवरात्रीमा व्रत बस्दा के खाने, के नखाने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
शिवरात्रीमा व्रत बस्दा के खाने, के नखाने ?
व्रत तीन प्रकारका हुन्छन्– निराहार, फलाहार र अन्न आहार
प्रा.भवानी प्रसाद खतिवडा
विशेष गरी व्रत तीन प्रकारका हुन्छन्– निराहार, फलाहार र अन्न आहार गरेर गरिने व्रत । व्रत बस्दा विशेषतः निराहार व्रत बस्नु भनिन्छ । तर, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्र व्रत बस्नु उचित हुन्छ । स्वास्थ्यमा समस्या हुनेहरूले वा निराहार व्रत बस्न गाह्रो हुनेहरूले भने व्रत बस्दा के खाने र के नखाने भन्ने कुरा जान्नु अत्यन्त जरुरी हन्छ ।
तपाई शिवरात्रीमा व्रत बस्दै हुनुहुन्छ तर निराहार व्रत बस्न सक्नु हुन्न भने फलाहार व्रत बस्न सक्नुहुन्छ । विभिन्न फलफूलहरू र फलफूलको जुस खान सक्नु हुन्छ । स्याउ, केरा, आँप, अंगुर, सुन्तला अनार, मेवा लगायत फलफूल सेवन गरेर व्रत बस्न सकिन्छ ।
तपाई अन्न आहार गरेर व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने अन्नमा खान हुने चिजहरू र खान नहुने चिजहरूको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ । व्रत बस्दा खान हुने चिजहरूलाई ‘हविष्य’ भनिन्छ भने खान नहुने चिजहरूलाई ‘आमिस’ भनिन्छ । आमिस पदर्थहरूमा जस्तै मासु, मह, भटमास, नसालु पदार्थ, बासी अन्न, गुन्द्रुक, डढेको खानेकुरा आदि पर्छ । यस्ता चिज व्रत बस्दा खान हुँदैन । त्यस्तै क्रिया दुष्ट चिजहरू पनि व्रतमा खान हुँदैन । उदाहरणको लागि कुनै फलफूल काटिदै छ, त्यसलाई च्वाट्ट काट्न मासु जसरी भनियो वा काटियो भने त्यो फलफूल पनि अशुद्ध हुन्छ । भावदुष्ट चिजहरू पनि व्रतको बेला खानु हुँदैन । जस्तै दही मोही खान मन छ तर कस्तो जाँड जस्तो गनायो भनियो भने त्यो भाव दुष्ट हुन्छ र ती पनि खान हुँदैन ।
व्रत बसेको बेला खान हुनेमा हविष्य चिजहरू पर्छन् । जस्तै चामल, रहरको र मुंगको दाल, जौ, मिस्री, आलु, अदुवा, घिउमा पकाएका खाना, सिधे नुन तथा दूध आदि खान हुन्छ । यी चिजलाई शुद्ध मानिन्छ र व्रत बसेका बेला यी चिजहरू खान उचित मानिन्छ ।
प्रस्तुति सुमित्रा लुईटेल